यूएसबी टाइप-सीलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने ईयूको प्रस्तावले कति प्रकारका चार्जरलाई विस्थापित गर्ला? - Thulo khabar
यूएसबी टाइप-सीलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने ईयूको प्रस्तावले कति प्रकारका चार्जरलाई विस्थापित गर्ला?
यूरोपियन यूनियनले हालै स्मार्टफोनका लागि एकै प्रकारको यूएसबी टाइप-सी केबल भएको चार्जरको प्रस्ताव गरेको छ।
ईयूले टाइप-सीलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर एउटै विश्वव्यापी अर्थात् यूनिभर्सल चार्जरको नियमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
यसबाट अलग अलग कम्पनीका मोबाइल प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा घर परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ। यसबाहेक मोबाइल चार्ज गर्नका लागि उत्ति नै प्रकारका र परिमाणमा चार्जर राख्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने बुझिएको छ।
यदि ईयूको यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा आगामी केही महिनाभित्र विश्वभर नै एकै प्रकारको चार्जरबाट सबै फोन चार्ज हुने सुविधा आउन सक्छ।
तर हालसम्म बजारमा गइसकेका फरक फरक कम्पनीका फरक फरक डिसभाइका चार्जिङ पोर्ट र चार्जर अलग अलग नै हुने भएकाले ती डिभाइसहरुमा यो नियम लागू नहुन सक्छ।
तर यो नियम पारित भइसकेपछि निर्माण हुने स्मार्टफोनहरुमा भने एकरुपता आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर पनि विश्वका थुप्रै देशमा थुप्रै प्रकारका निर्माताहरु भएकाले यसलाई विश्वव्यापी रुपमै कार्यन्वयन गर्न भने अझै थुप्रै समय लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
हालसम्म कस्ता कस्ता कनेक्टर आए र कुन कुन कनेक्टर अझै प्रयोगमा छन् आउनुस् जानाैं:
१. यूएसबी टाइप-ए
यो आयाताकार हुन्छ जसलाई यूएसबी माउस, पेनड्राइभ तथा चार्जिङ केबलको पहिलो छेउमा प्रयोग गरिन्छ। साथै हार्डड्राइभमा उपलब्ध कनेक्टरमा पनि यसैको प्रयोग हुन्छ।
२. यूएसबी टाइप-बी
यो कनेक्टरको आकार चारकुने हुन्छ र यसलाई सामान्यतया: प्रिन्टर, मोडेम, स्क्यानर तथा अन्य केही विशेष उपकरण हरुमा प्रयोग गरिन्छ।
भविष्यमा लगभग सबै डिभाइसमा यही कनेक्टर हुनसक्ने सम्भावना छ जसबाट चार्ज हुनुका साथै डाटा ट्रान्सफर पनि गर्न सकिनेछ। यो कनेक्टर धेरै सानो तर रिभर्सिबल हुन्छ। यसलाई उल्टो सुल्टो दुवै तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ।
३. लाइटनिङ केबल
यो केबल एप्पलले आफ्ना डिभाइसहरुमा प्रयोग गर्छ। कम्पनीले सन् २०१२ देखि यो कनेक्टरको प्रयोग गर्दै आएको छ जुन अरु कुनै डिभाइसमा मिल्दैन। यो पनि यूएसबी-सी जस्तै रिभर्सिबल हुन्छ।
४. माइक्रो यूएसबी
यसलाई सबैभन्दा पहिले सन् २००७ मा डिजाइन गरिएको थियो। माइक्रो यूएसबी दुई प्रकारको हुन्छ- माइक्रो ए तथा माइक्रो बी। यसलाई प्राय कम्प्युटरमा भिडियो गेम खेल्दा र फोन चार्ज गर्नका लागि उपयोगमा ल्याइन्छ।
५. मिनी यूएसबी
यो कनेक्टर मोबाइल तथा कैमरामा प्रयोग हुन्छ। देख्दा सानो आकारको हुने यो कनेक्टर माइक्रो यूएसबी आए पछि स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न बन्द गरियो। तर अझै पनि केही फिचर फोन तथा क्यामरामा यसको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ।